१०औं महाधिवेशन पछिको बहस : कुन हो आधिकारिक गैर आवासीय नेपाली संघ ?
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशन विवादबीच दुई ठाउँमा छुट्टाछुट्टै सम्पन्न भयो। एउटा अधिवेशन २२ देखि २५ मार्चमा संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेले सम्पन्न गराए। अर्को २६ देखि २७ मार्चमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आयोजनामा सम्पन्न भयो।
विषय नं १– कुन अधिवेशनले कानुनी मान्यता पायो?
विषय नं २– के तीन जना अध्यक्ष हुनु विधानसम्मत हो?
विषय नं ३– मुद्दा मामिलाले के गरे, के गरेनन्?
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २४, २०७९, २०:०९:००